Indlela vimbela kahle kusuka izindandatho ukhonkolo ebusika: ubuchwepheshe, izindlela, izinto kanye nokubuyekeza
Umbuzo kanjani ukuba vimbela kahle kusuka izindandatho ukhonkolo, akhathalela ngokuyinhloko izakhamizi ehlobo, abanikazi izindlu zangasese futhi izakhamuzi. Ngokuvamile, lokhu inkinga isixazululekile ngaphambi kokuqala ukwakhiwa womthombo, ikhumbula izimo zezulu. Kodwa lokhu akulona njalo kunjalo. Kwenzeka ukuthi ukufudumala akuyona wacabanga ekuqaleni. Futhi lapho sibhekene nenkinga, futhi okokuqandisa yamanzi kahle ebusika, umnikazi is fully aware of iphutha lakhe. Ngakho, impendulo yombuzo othi yokufudumala kahle zingahlukaniswa zibe isiqondiso ezimbili eziqondile. Inkulumo yokuqala mayelana nendlela vimbela kahle kusuka izindandatho ukhonkolo ngokushesha ngesikhathi ukwakhiwa. Esesibili - ukuthi kungenziwa ngemva kokuba sekwenzekile.
Kungani kungekho muntu akazange ukuxoxa imithombo?
Ukusetshenziswa ngezinto zokwakha zesimanje kusiza kakhulu inqubo ukwakhiwa. Lokhu isivinini, futhi ihlala isikhathi eside, futhi abheke ukuthi kungenzeka kwezomnotho. Kodwa izindlela zaphakade 'wawushiywe yisikhathi "banelilungelo khona. imithombo Ngasekuqaleni eRussia, ezakhiwe ziqhamuka izinkuni izinhlobo ezikhethekile. ukusebenza kahle kakhulu imithombo ovunyelwe ukusebenzisa iminyaka eminingi, kanye conductivity ongaphakeme ezishisayo izinkuni akazange avumele amanzi iqhwa, ngisho kunesithwathwa olunzima. Kodwa manje lezi ubuchwepheshe kukhona into yesikhathi esidlule, futhi kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ukwakhiwa imibuthano ngomumo eyenziwe ukhonkolo. Indlela obkapyvaniya kubo kancane kancane afakwa phansi ukufinyelela ukujula oyifunayo. Ukuze ugcine amanzi ngaphakathi kahle ayizange ice, ezingeni awufiki ezingeni inhlabathi umnkantsha ebusika. Uma lesi sifo behlangana, lona kuyaqabukela kube nezinkinga kakhulu. Kodwa akekho ivikelwe kusukela majeure amandla kanye nezinhlekelele zemvelo. Kunoma ikuphi, ukuba ephephile hhayi ukuvimbela kusengaphambili, ngoba akudingi mzamo owengeziwe kakhulu, futhi kwemali esetshenziswe ukwahlukanisa, hhayi kangako kukhulu yobungozi.
Kwenzakalani uma ungawakhi libe ungqimba olubamba ukushisa?
Ukuziba ukwahlukanisa angabakhulula hhayi kuphela ngokuphazamisa yokushoda wamanzi aphuzwayo emadolobheni isikhathi esithile. Uma kahle efakwe sokumpompa, futhi kuwo kukhona amapayipi amanzi endlini, okokuqandisa yamanzi uzokhipha lonke imishini ekulimaleni. Lungisa Ezazimzungezile - lena inqubo eqolo, ngaphezu, le ndaba kube nzima yokuthi inhlabathi nqabela ebusika kahle, futhi uma amanzi amapayipi kuyokwenza iqhwa kahle, lokhu kungaba isizathu break yabo. nomsebenzi wokuvuselela umhlaba ngemva uzodinga ukwenza ezimweni ezinzima noma ukuhlehlisa kuze entwasahlobo. ukunwetshwa uketshezi phakathi umnkantsha futhi unesibopho ukubhujiswa izindandatho ukhonkolo nezihlanganiso phakathi kwazo. Entwasahlobo, ngesikhathi izikhukhula, amanzi angaphansi komhlaba luningi nkinga ingcindezi yabo phezu kodonga emgodini kuxhomeke kakhulu. Futhi yiziphi izikhala kuzoholela kokuziphatha ongenakugwenywa amanzi angcolile nge ukungcola ezihlukahlukene kahle. Ukuze igweme izinkinga ezinjalo, kudingeka ngokushesha ufunde indlela vimbela kahle kusuka izindandatho eziphathekako ukwenza yonke imisebenzi efanele.
Ngasiphi ukujula udinga ukubeka ukwahlukanisa?
Lapho umsebenzi wenziwa inkambo ukwakhiwa, ukwahlukanisa kumele igcwele emhlabeni kahle kancane kancane, njengoba instillation. Ukujula ithebhu ukwahlukanisa incike onjani sezulu esifundeni. Kwenzeka ukuthi ngisho ezijulile kakhulu kwi freezer Krinitsy ukujula esingeqile 15-20 amamitha. Ngokuvamile kuyoba okwanele ukuba abeke ukwahlukanisa a engekho ngaphezu kweyodwa ukujula nengxenye ngamamitha amabili. Ubuchwepheshe yale nqubo ilula, into esemqoka - ukuze bagcine iziqondiso zendlela vimbela kahle. Izindlela ukufudumala kahle kwezincwadi kuncike ezintweni onjani ebusika esifundeni.
Uma frost akuyona enamandla kakhulu, phansi ayigongobali ngokujulile futhi isikhathi eside, kungenzeka ukuvikela Krinitsa phezulu ngokubeka ku ohlakeni lokhuni ngesivalo uvalwe efanelekayo. Lokhu indlu akakwazi nje ukubeka phansi emhlabeni kahle. Ukuze kubalulekile ukwakha isisekelo. Ukuze ugweme skewing, futhi subsidence, isisekelo kumele yakhelwe ngokuvumelana nemithetho, kumuntu ukujula ezanele (hhayi ngaphansi kuka ezingeni isilinganiso okokuqandisa phansi) nge ububanzi imitha elilodwa. Ngaphambi nosimende ukhonkolo kuthululwe phansi komqamelo ukudala izingqimba zenhlabathi, amatshe nomhlabathi, okuyinto izodlala indima isimiso sokukhuculula. Umcamelo kufanele kube ngokucophelela ohlangene bese uthele isixazululo. Ngemva kokufaka i-uhlaka lokhuni kwakheka phakathi kwawo futhi izindonga Slots kahle ngikho okuzokuba ukwahlukanisa. Ngenxa yale njongo kungenzeka ukusebenzisa amaminerali uvolo, foamed plastic amashidi, ukhonkolo block noma Penoizol. Le ndlela ibizwa kahle emiphakathini eningizimu, futhi labo abahlala kuyo inyakatho, imiphumela unganelisekile.
kahle ukwahlukanisa ubuchwepheshe
Indlela vimbela kahle kusuka izindandatho ukhonkolo ngaphansi komhlaba - kungcono umbuzo kancane more xaka. Lo msebenzi wenziwa izigaba eziningana.
kahle Izindandatho ngaphambilini baphathwe izindlela ezikhethekile ukuvimbela Ukungena emanzini walihlanganisa nomhlabathi phansi. Kodwa lapho ukhetha kubalulekile ukucabangela kugcineke kungenzeka usebenzisa imali isebenze nge imithombo.
Isendlalelo esilandelayo ukwahlukanisa ungqimba ngqo. Umgodi efudumele izindandatho ukhonkolo, cabangela kancane okunye.
Izinto zokuvala umoya uyisonge Hydro and umusi ekuvikeleni ungqimba. Ngokuvamile le njongo zisebenzisa ifilimu. isilinganiso esinjalo singasiza ukuze zigweme ukuthintana ukwahlukanisa phansi, ukufingqa sokuxazulula kuso.
Ukuze ulungise wonke isakhiwo emhlabeni izindandatho setha formwork sokhuni, kugcina yonke izingqimba ndawonye.
Ekupheleni emseleni babe nabantwana bagcwalise umhlaba. Ukuze le nqubo, ochwepheshe ukweluleka hhayi ukusebenzisa umhlabathi emseleni uqobo. Kahle ngeke alternate umgodi ngezinto zokwakha ezimbili osezingeni ezahlukene. Lokhu kungaba isihlabathi futhi amatshe, noma ubumba nobumba ukunwetshwa. Izinhla nge ingxenyenamba esihle ngokuvamile sibekwa ukushuba kufika ku-15 cm, kanye nezinye -. 20 cm isilinganiso esinjalo singasiza ukwakha uhlelo izinga amanzi, lokhu kuzonciphisa ingozi yamagciwane yamanzi kahle futhi kuncishiswe ingcindezi phezu kwezingange zawo.
Lena zakudala, Indlela ephumelelayo yokuhlela, kanye nokubuyekeza ngakho omuhle kakhulu.
Kuthiwani uma Krynica eyakhelwe kakade?
Indlela vimbela kahle kusuka izindandatho ukhonkolo ebusika, uma kakade wakha? Ubuchwepheshe kuyafana esimweni esedlule, kodwa kuyodingeka amba umsele. ukwenza lo msebenzi ngesandla nge lokwela. Ukusebenzisa imishini ezikhethekile kungaholela ukufuduka kwenhlabathi futhi amasongo, ukwephulwa kwamalungelo ubuqotho izingqimba zenhlabathi. Ezinye izindaba zika-umsebenzi kwenziwa ngoba ubuchwepheshe unikezwa. Kufanele wazi futhi ukuthi kubalulekile ukunakekela okuhle ikhava ye kahle. Heat ukulahlekelwa ngenxa ukuntula kwayo noma kufanelekile abampofu imiphetho uyophinde kubangele umnkantsha. Lapho phezu zaziwa kahle indlu lokhuni noma esinye isakhiwo, ikhava eyenziwe isangweji panel, phakathi okuyinto wabeka ungqimba Foam noma amaminerali uvolo. Unformed ngaphandle umthombo avaliwe umnyango eziphathekako cap plastic. Labo abahlala ezindaweni ubusika bakhona abubandi lwaleli indlela njengoba ezishibhile kuqhathaniswa kanye nama-practical.
ngokuvamile lisetshenziswa Yini izinketho ukwahlukanisa?
Ukuze ufunde indlela vimbela kahle kahle kusukela izindandatho ukhonkolo, udinga ukwazi ukuthi yini-ke ongayenza. Izinketho baningana ambalwa. Phakathi entsha - ukufudumala penoizol. Isicelo ukwaziswa okunjalo odongeni kahle aqede ezivuzayo Penoizol ihlanganisa ngokuphelele yonke isikhala, aqede ukuvuza emoyeni noma emanzini abandayo. Lobu buchwepheshe kuhilela ukusetshenziswa imishini ekhethekile ngesandla musa ke ngeke zisebenze. Futhi izindleko inkonzo akuyona ezishibhile, ngakho-ke namanje hhayi ovamile kakhulu ezweni lethu. Ezifudumele ngezinye izikhathi asetshenziswa ukulishafisa nangokuvikela amaminerali uvolo. Inzuzo le ndlela ukuthi kungenzeka kakhulu uvalwe bopha ukwahlukanisa emhlabeni kahle. Kodwa ezinye izazi zixwayisa ngokuthi impahla Liyashabalala kalula futhi angagcina sokudiliza ku Imicu yotshani ngabanye futhi singene amanzi kahle.
zifudumele ka polystyrene enwetshiwe
Ukumboza kahle kusuka polystyrene Foam ukhonkolo izindandatho - inketho yimpumelelo kakhulu, ochwepheshe bathi. I izakhiwo le nto iyingqayizivele ngempela. He is an isithiyo kakhulu emoyeni abandayo, liphinde okuhlala kakhulu futhi engabizi. Ngenxa yalezi zinjongo ngokuvamile zisebenzisa ishidi impahla, engesiyo njalo elula, ngoba ishidi dlula bobunjwa oyindilinga izindandatho eziyinkinga.
Abakhiqizi bathole indlela yokuphuma kuleso simo bese ukunikeza abathengi ngomumo eyenziwe ukwahlukanisa izingxenye, okuyinto abe ukuma ongaphambili omise. Osayizi ayatholakala ejwayelekile, ngaphansi diameters ezivamile ka mgodi izindandatho. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa ngobuningi polystyrene granulated. Kulokhu, ukwakha kumele uzimele usebenzisa slats sokhuni ukubophela ukufulela impahla ungqimba phansi emhlabeni Krinitsy izindonga bayigubungele ukuvulwa kwakheka granule. Ngale ndlela kungenzeka vimbela kahle, hhayi kuphela Foam amabhola, kodwa futhi nezinye ukwahlukanisa okuxekethile.
Lena indlela ephumelelayo, futhi abanikazi imithombo oyikhethile igama lakhe, ukuqinisekisile ukuthembeka ukwahlukanisa ezinjalo.
Usimende Lighthouse - isiqinisekiso izinga surface
Amatshe ochotshoziwe: ngokungafani, izithombe
Ukukhucululwa iphrojekthi indlu ezisondelene
Kwezakhiwo izakhiwo. Project izindleko izilinganiso nokwenza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo
Ukuthululela phansi ngezandla zabo. ekubunjweni ubuchwepheshe efudumele futhi self-yokululama phansi, ingxube ezidingekayo ukuze kuqale umsebenzi
Umtholampilo "zamazinyo-Service", Novosibirsk: ikheli, amasevisi kanye nokubuyekeza
Opel Astra GTC: incazelo imodeli kanye nokubuyekeza
Intuthu ukubhuqa "Korher SC1030": impendulo. Intuthu bayabulawa electro
Ukukhanyisa Artificial: ulwazi olubalulekile
I-vacuum cleaner engakwazi ukuvuselelwa - lula kwi-design compact
"Ama-Domestos": imiyalo yokusetshenziswa kanye namathiphu ahlukahlukene wokuhlanzeka okuhle endlini
Imatra Impophoma: Ubuhle usohlelweni
Isicanucanu: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela